Mmepụta Nduku na Egypt: Nbupu nke Mbupụ Na-akpali Mmasị na Biopesticides - Magazin System Magazine
Ihe anyị na-ekwu banyere Egypt, ọtụtụ mgbe anyị anaghị ekwu maka ọrụ ugbo. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ a na-enye ihe dị ka 12% nke GDP mba, nke e mere atụmatụ na ihe ruru ijeri $ 250.
Ọtụtụ n'ime obodo a dị na eriri ọzara, nke anaghị egbochi Egypt ịbụ ndị na-eburu nduku na EU. N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị Ijipt na-enweta nsonaazụ dị elu site na iji ihe nchịkwa dị ala - nkezi nke kwa afọ nke ọgwụ ahụhụ dị ala karịa nkezi ụwa. Olee otú ha si eme ya?
GROPRO Corp., onye America na-emepụta ihe na onye na-eweta ngwaahịa nchekwa ihe ọkụkụ sitere na ndu, mechara njem njem nyocha nke ugbo na Egypt. N’ọnwa June, GROPRO weputara akụkọ nke ndị ọkachamara kwadebere na njem ahụ, na Portato News Today Portal. Lee ihe ole na ole sitere na ya.
Tụgharịa ọzara ka ọ bata n'ọhịa
Oke ala ubi Egypt na - akachasị anya na ndagwurugwu Naịl na Nile Delta, nwere ọtụtụ mmanị mmanụ na ala nkịtị na Saịnaị. A na-agba mmiri niile dị n'Ijipt mmiri, ma e wezụga ebe ụfọdụ n'ụsọ oké osimiri Mediterranean.
N'ihi ịdị ala nke mmiri Naịl, nchebe nke ihe ọkụkụ a kụrụ na mpaghara ndị a na-agba mmiri bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na-ekwe nkwa ma hụ na ụdị ihe ọkụkụ ga-adị mma n'ọdịnihu (yana ọtụtụ ngwaahịa) akọpụtara.
Agaghị akpọkarị njikwa ala ndị Ijipt dị ka nnukwu: nha nke nkezi ugbo dị ihe dị ka hectare 1. Ala a na-akọpụta kwa afọ na Egypt dị ihe dị ka nde 4,83. Gọọmentị na-arụ ọrụ na nnukwu atụmatụ itinye ego iji mee ka ala ọrụ ugbo nke ala ahụ dịkwuo site na ịtinye hekta nde 1,2 dị ka akụkụ nke usoro ịgbake ala na ndịda. N'ime iri afọ anọ gara aga, agbakwunyere ala dị hekta 370 nke ala a na-agbapụta ọhụrụ na ntọala ọrụ ugbo nke Egypt.
Egypt wezugara ozara nke ugbo rue uzo oru igbapu mmiri na teknụzụ nke ugbo.
Mmepụta kwa afọ nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na Egypt na 2018 bụ ihe ruru nde 35 nde (FAO). Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-akọ tomato, eyịm na poteto. Ala Egypt bu nnukwu ihe e ji esi nri.
Mbupụ Mbupu Nduku
N’afọ 2018, Ijipt bupụrụ ihe karịrị 759 tọn poteto na-ere ahịa wee banye mba ise na-ebupụ mbu, na-eburu nduku na Russia na EU. N'afọ 200, Egypt ji ụwa mbupụ akụpe ụwa 2019%, mbupụ nduku Egypt na 5 ruru nde US 2019.
A maara poteto nduku nke Egypt maka ezigbo mma ha, ebe ha tolitere na ụrọ ma ọ bụ aja nwere aja. Nduku ndị Egypt na-ewu ewu na ndị na-azụ ahịa maka ike ha na-echekwa ogologo oge. Oge mbuba maka poteto Egypt na-ewe site na etiti Jenụwarị ruo na mbido ọnwa Mee.
Ojiji nke biopesticides na oru ugbo na Egypt
Nyere oke mbuba nke nri Egypt sitere na EU, okwu banyere ogo ngwaahịa ndị a na-adịwanye mkpa. Ahịa Europe nwere iwu siri ike nke machibidoro iji kemịkalụ na mmepụta nri.
N'otu oge ahụ, ndị na-emepụta Egypt adịghị arụsi ọrụ ike n'iji biopesticides, mana ndị ọkachamara GROPRO kwenyere na ọnọdụ a ga-agbanwe.
isi: Akụkọ Nduku Taa
Tags: biopesticidesegyptian ndukuogbugba mmiri n'ubi
N'afọ a, na mpaghara Samara, nke mbụ, drone kụrụ ọtụtụ hectare na mọstad na klova dị ụtọ. Ọ bụ nnwale mbụ na mpaghara...
Na 1987, Franz Grimme tọrọ ntọala ụlọ ọrụ INTERNORM, ụlọ ọrụ maka mmepụta ngwaahịa sitere na ihe sịntetik, na 1995 ...
Ọnụ ọgụgụ ndị bi n'ụwa na-eto ngwa ngwa na usoro nke iri nri dị mma gburugburu ụwa na-eme ka ọ bụrụ ihe na-achọsi ike ...
SELECT 200 bụ ụdị mbuli elu dị n'ahịrị abụọ emebere maka ọnọdụ ọrụ dị iche iche na mgbanwe. A na-amata igwe ahụ site na ọtụtụ ndozi ya, dịka ...
Na Kuban, ihu igwe adịghị emetụta owuwe ihe ubi dị mma, a na-ebu amụma ga-adị ka ọ bụ n’afọ 2016
Gọọmentị agaghị edozi ọnụ mmanụ ọkụ maka ndị ọrụ ugbo